Resaky ny mpitsimpona akotry : fihitatry ny famitaham-bahoaka | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fihitatry ny famitaham-bahoaka
Azo lazaina fa efa nandalo sivana maro ireo tanora nahazo ny diplôma bac izay manambara fahafahampo mikasika ny fahaizana ankapobeny. Alohan’ny ahatongavana amin’izany dia maro ireo very an-dalana, any amin’ny ambaratonga voalohany moa dia misy ireo lany fanantenana, ny mpianatra any amin’ny sekolim-panjakana dia zara raha manana vintana ho lasa lavitra amin’ny fanohizana fianarana. Ny zanaky ny fianakaviana sahirana moa no tena voakasik’izany, raha lazaina amin’ny fomba mivantana dia ny maro an’isa anivon’ny mponina dia mizaka io fanavakavahana io, voafitaky ny fampianarana tsy zarizary. Resaka miverimberina matetika moa ny momba izay, efa madilo mihitsy angamba ny sofin’ireo tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Fampianarana. Toa tsy mijanona eo anefa ny famitapitahana araky ny fandinihana ny valin’ny fifaninanana ho mpitsabo mpanampy mpiasam-panjakana. Maro anie ireo sekoly mandrindra fianarana ambony ahafahana mampitombo fahaizana ary misy aza manome diplôma. Tsy ampy ahatongavana ho mpiasam-panjakana anefa izany, na ilaina aza ny fananana ilay diplôma dia ny fifaninanana no hany dingana farany. Loza anefa, teo amin’ireo mpifaninana aman-jatony dia ambany dia ambany ny tahan’ireo nanana fahaizana mahafatram-po araky ny fenitra napetraka, mahamenatra ny milaza io taha io, nefa moa dia izany no zava-misy ka tsy hita ho afenina, iray isan-jato, 1% !
Trangan-javatra milaza loza. Tsy ny minisiteran’ny Fahasalamana no andeha homen-tsiny ka ho ampangaina ho manasarotra ny raharaha. Ain’olombelona no koloin’ny mpitsabo mpanampy, tsy afaka atao antsirambina. Olona azo toky eo amin’ny toe-tsainy sy eo amin’ny fahaizany ny raharahany no azo ametrahana izany andraikitra izany.
Aiza ho aiza kosa ny an’ireto mpianatra 99 isaky ny zato ? Moa ve sanatria dia kely loha daholo izy ireo ka tsy naharaka ny fampianarana nomena azy ? Samy nandoa saran’izany fampianarana izany izy ireo nandritra ny taona maro. Sao dia fitaka fotsiny ny fampianarana ampitain’ireo sekoly samihafa nandrantony fahaizana ?
Mety ho maro angamba amin’ireo mpianatra no nitaiza farasisa tamina fampianarana tsizarizary tany amin’ny ambaratonga voalohany sy faharoa, nefa vola isam-bolana izy ireo ka na dia tandrin’ny mpampianatra aza ny lesoka tohizany ihany ny lesona sao manapaka ny fihinanana. Ny minisitera dia manohy ihany koa ny fanomezana alàlana sy fankatelemana ireny sekoly mamita-bahoaka ireny : vola no mibaiko.